Koxada kubadda cagta ee Zanit ayaa dalab u dirtay weeraryahanka Man utd Berbatov. Kulmiye Radio - Mogadishu, Somalia
Koxada kubadda cagta ee Zanit ayaa dalab u dirtay weeraryahanka Man utd Berbatov. 8/8/2012 2:31:00 PM
| Comments() Manchester--KNN--Kooxda rer Ruush ee Zanit la irahdo ayaa lala xiriirinayaa in ey la wareegaan weeraryahan kooxda kubadda cagta ee Man Utd iyo xulka Bulgaria ee dimetri Berbtov waxa wararku ay sheegayaan in xiddigasi laga yaabo in saacadaha soo socda uu heshiis la galo kooxda rer Ruush ee zanit. Kooxda rer Ruush ee Zanit la irahdo ayaa lala xiriirinayaa in ey la wareegaan weeraryahan kooxda kubadda cagta ee Man Utd iyo xulka Bulgaria ee dimetri Berbtov waxa wararku ay sheegayaan in xiddigasi laga yaabo in saacadaha soo socda uu heshiis la galo kooxda rer Ruush ee zanit.
Xidigii hore ee kooxda Tottenham hadana ka tirsan kooxda Man Utd ayaa waxa la sheegaya in Zanit ay soo bandhigtay lacago ey ku doonayaan xiddigasi kuwaa oo gaaraya ilaa 5million oo Pound sidii xiddigasi uu uga mid noqon lahaa ciyartoyda Zanit u metelaya horyaalka Ruushka laga ciyaaro.
Man waxa ey sheegayaan in xiddigani an mustaqbalkiisu saldhigan eel al waday in uu ku biro Galatasaray hada ay suura gal tahay in la siiyo zanit isla markaana laga qaado lacagah e ku doonayaan in uu uga mid noqdo ciyartoyda kooxdasi.